Barashada degdegga ah ee Ingiriisiga iyo luqad shisheeye ah. Habka ugu fiican ee wax loo barto
Kaararka luqadda ee barashada luuqad shisheeye waa habka ugu fudud iyo kan ugu badan ee is-barashada. Hal dhinac wuxuu leeyahay erey adag, dhinac kalena wuxuu leeyahay macnaha ama tarjumadiisa. Ka dib markaad sameysid shukulaato, waxaad bilowdid inaad fiirisid kaararka, si tartiib ah u dhigo wixii aad horey u soo baratay, ilaa aad ka baratay gogoldhiga […]
Sidee loo hagaajiyaa erayada? Siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu xasuusto ereyada cusub
Sidee loo hagaajiyaa erayada? Arday kasta oo baranaya luuqad shisheeye wuxuu weydiinayaa su’aashan. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aasaasi u ah hagaajinta ereyada, kaas oo aan ku dabooli doonno maqaalkan: 1. Dhageysiga iyo ku celinta ereyada aad rabto inaad xasuusato 2. Isticmaalida habka kaadhka cas 3. In la abuuro jaaliyado muuqaal ah 4. Isugeynta weedhaha […]
Sidee loo bartaa Ingiriisida dhaqso?
Sidee loo bartaa Ingiriisida dhaqso? Anigu waxaan isweydiiyay su’aashan laba sano ka hor (da’da 32 jir). Iyada oo bilowday inay si firfircoon uga barato luuqad cusub oo ka soo baxaysa xoqan, waxaan ku soo koobay saddex dhibaatooyin waaweyn: 1. Hagaajinta ereyada iyo kaydinta ereyada adag ee la xariira 2. Waqti la’aanta barashada luuqadaha shisheeye 3. […]
Sidee loo helaa dadka ku hadla afkooda hooyo?
Sidee loo helaa dadka ku hadla afkooda hooyo? Su’aashani waa mid xiiso u leh qof kasta oo baranaya luuqad shisheeye. Ka dib horumarinta guusha ee qaybaha ugu horreeya ee barnaamijka LingoCard mobile ee meelaynta dadweynaha iyo fudaydhinta helitaanka, app wuxuu helay tobanaan kun oo isticmaala. Laakiin maxaa ku saabsan barashada luuqadda? Waxaan u maleynay – […]